महाधिवेशन गर्न नेकपा र कांग्रेसको आनाकानी - नेपालबहस
महाधिवेशन गर्न नेकपा र कांग्रेसको आनाकानी
| १४:२७:१३ मा प्रकाशित
२ कात्तिक, काठमाडौं । कोरोना संक्रमणको चपेटामा परेकै बेला मुलुकका दुई ठूला राजनीतिक दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र नेपाली कांग्रेस महाधिवेशनको धपेडीमा छन् । नेकपाले आगामी चैतमा एकता महाधिवेशन गर्ने मिति तय गरेको छ भने कांग्रेसले फागुनका लागि कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ ।
तर दुबै पार्टीका कार्यशैली र व्यवहारले निर्धारित समयमा महाधिवेशन गर्ने कुरा पत्यारिलो लाग्दैन् । सत्ताधारी नेकपामात्रै होइन प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस भित्र पनि बेतोडको घर झगडा छ । एकले अर्कालाई निषेधको राजनीति गर्न पार्टी भित्रका गुट उपगुट सकृय छन् । दुबै दलभित्र त्रिपक्षीय भिडन्त देखिन्छ । नेकपामा प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेता माधवकुमार नेपालबीचको झगडा पूर्वएमाले कालबाटै झांग्गिएको हो । पछि पूर्व माओवादीसँगको एकता प्रकृया सुरु भएपछि तीन गुटबीच बलियो प्रतिस्पर्धा देखिएको छ ।
प्रारम्भमा ओलीले प्रचण्डको साथ लिएर नेता नेपाल पक्षलाई किनारा लगाए । तर प्रचण्डसँगको प्रधानमन्त्रीमा आलोपालो गर्ने बेला आयो त्यसले नयाँ परिस्थिति खडा गरिदियो । अब ओलीले नेता नेपाल र प्रचण्ड दुबै खेमा विरुद्ध फायरिङ खोल्नुपर्ने अवस्था निर्माण भयो । उक्त फायरिङको प्रभावबाट जोगिन प्रचण्ड र नेपालबीच नयाँ समीकरण निर्माण भयो । यसले गर्दा ओली आक्रमक अवस्थाबाट प्रतिरक्षात्मक बन्न वाध्य भए ।
त्यो अवस्था अहिले पनि छ । तर ओली विस्तारै आक्रमक शैलीमा फेरि देखिन थालेका छन् । नेकपा भित्रको घर झगडा मिलाउन भएका प्रयासले नयाँ सम्झौता भएको थियो । प्रतिनिधिसभाको बाँकी कार्यकाल ओलीले प्रधानमन्त्रीका रुपमा काम गर्ने र पार्टी महाधिवेशनसम्म प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने । साथै, सरकारले गर्ने महत्वपूर्ण नियुक्तिमा दुबै अध्यक्षबीच सहमति जुटाएर सचिवालय बैठकबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने निर्देशन स्थायी कमिटीले दिएको थियो ।
साथै, एकता प्रकृया तत्कालै टुंग्याउने निर्देशनसमेत दिइएको हो । तर ओलीले स्थायी कमिटीका कुनैपनि निर्देशन मानेनन् । सबै निर्णय र निर्देशन धोती लगाएको अवस्था छ । यही शैली जारी राख्ने हो भने दशैंपछि अर्काे माहोल बन्ने सम्भावना देखिन्छ । प्रचण्ड र नेता नेपालले ओलीविरुद्ध फेरि मोर्चाबन्दी बलियो बनाउने अवस्था छ । खासगरी ओलीले राजदूत नियुक्ति र मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा एकलौटी गरेपछि असन्तुष्टी चुलिएको छ ।
त्यसैले आउने महाधिवेशन समयमै हुने कुनै सम्भावना देखिंदैन । साथै, ओलीले अब पार्टी अध्यक्षका रुपमा कक्षा नदोह¥याउने भनेपनि त्यस्तो माहोल देखिंदैन । ओलीको कार्यशैली र व्यवहारले गर्दा प्रचण्ड माधव नेपालले पत्याउन छाडेका छन् । कतै ओलीले फेरिपनि पार्टी अध्यक्षमा कक्षा दोह¥याउने पो हुन् की भन्ने सम्भावना आशंका बढेको छ । त्यसको छनक ओलीले दिइसकेका छन् । हिजो मृगौलाको दोस्रोपटक प्रत्यारोपण नगर्दा र अहिलेको अवस्थामा व्यापक बदली आएको छ । ओली निकटहरुले एकपटक फेरि अध्यक्षमा दोह¥याउन दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् । त्यसैले ओली फेरि आक्रमक शैलीमा प्रस्तुत हुन थालेको देखिन्छ ।
उता, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको अवस्था त अझै नाजुक छ । पार्टी महाधिवेशन नगर्न सभापति देउवा भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका छन् । विगत भन्दा परिस्थिति बदलिएको छ । देउवा दोस्रो कार्यकालका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने मुडमा छन् । तर उनका सहयोगी भने बाहिरिने क्रममा छन् ।खासगरी विमलेन्द्र निधिको सभापतिमा लड्ने सम्भावनाले देउवालाई अफ्ठेरोमा पारेको छ । बाहिर नबोलेपनि देउवा परिस्थिति प्रतिकुल बन्दै गएको बुझ्दैछन् ।
असन्तुष्ट पक्षपनि अब देउवाविरुद्ध कसिलो घेराबन्दी गर्ने तयारीमा जुटेका छन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई प्रतिस्पर्धाको मैदानमा नउतारी दोस्रो पुस्ताका एकजनामा सहमति जुटाउने प्रयास भएको छ । त्यो प्रयासमा निधिसमेत जोडिने अवस्था बनेको छ । जसले गर्दा देउवाको जित सहज छैन । त्यसैले उनी सकेसम्म महाधिवेशन टार्ने पक्षमा छन् । कोरोना संक्रमण व्यापक भएको भन्दै फागुनमा महाधिवेशन गर्न नसकिने उनको धारणा लगभग सार्वजनिक भइसकेको छ । त्यसलाई औपचारिकता दिन उनले कार्यसमिति बैठक डाकेका थिए । तर नेताहरु नै संक्रमित भएको रिपोर्ट आएकाले हाललाई स्थगित भएको छ ।
यही अवस्था निरन्तर अगाडि जाने सम्भावना देखिन्छ । दशैतिहारपछि कोरोना अझै फैलने पूर्वानुमान गरिएको छ । त्यस्तो अवस्था आउने हो भने कांग्रेसले फागुनमा महाधिवेशन गर्ने छैन । आगामी जेठ वा भदौ नयाँ मिति तय हुन सक्ला । तैपनि महाधिवेशन नै गर्न भने कसैले जाँगर देखाउने अवस्था छैन । यही अवस्था रहिरह्यो भने ठूला दुुई पार्टीले थप एकवर्ष महाधिवेशन नगर्ने सहमति जनाएर संविधानमै संशोधन गरे भने अनौठो नमाने हुन्छ । यस्तो प्रस्ताव पारित गर्न ओली र देउवा तयार हुने छन् ।
आज उपत्यकामा १८८८ संक्रमित, ४४ हजार २८८ जना डिस्चार्ज ९ घण्टा पहिले
तरुण दलद्वारा स्वास्थ्य सामग्री सहयोग ९ घण्टा पहिले
दक्षिण कोरियाको कार निर्यातमा वृद्धि ३ घण्टा पहिले
चितवनमा उपचाररत थप दुई जना संक्रमितको मृत्यु १३ घण्टा पहिले
फरार पाँच प्रतिवादी पक्राउ, कारवाहीका लागि अदालतमा पेश १४ घण्टा पहिले
पछिल्लो त्रैमासिकमा सामसुङ कीर्तिमान आम्दानी गर्न सफल १३ घण्टा पहिले
नेपाली विद्यार्थीलाई निर्घात कुटिएकोमा नेविसंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण १४ घण्टा पहिले
बैतडीको पाटन बजार क्षेत्र ६ दिन पहिले
कोरोनाबाट मेक्सिकोमा ९० हजार, अर्जेन्टिनामा ३० हजार बढीको मृत्यु १ दिन पहिले
रुखबाट खसेका युवकको उपचारमा जुट्यो ३ लाख ३ दिन पहिले
कोरोना कहरबिच आँचललाई अष्ट्रेलिया लैजादै बले र इकु ६ दिन पहिले
ट्वीटर ह्यान्डल ‘शीतलनिवास’ ‘डिएक्टिभ’ ! २ दिन पहिले
नवरात्रमा पनि खुलेनन मन्दिर, भक्तजनले बाहिरबाटै दर्शन गरि फर्किए ६ दिन पहिले
पेरिसमा महामारीबाट प्रभावित व्यवसायलाई राहतको माग गर्दै होटल व्यवसायीद्वारा जुलुस २ हप्ता पहिले
चक्लेट दिएर ९ बर्षीया बालिकामाथि तीन महिनादेखि बलात्कार ! ४ हप्ता पहिले
प्रदेश–२ मा संक्रमणमुक्त हुने १२ हजार नाघे २ हप्ता पहिले
स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना पुष्टि भएपछि सेवा बन्द ४ हप्ता पहिले
सञ्चारमाध्यमको अश्लील सामग्रीप्रति भारतलाई नेपालको ‘कुटनीतिक’ नोट ४ महिना पहिले
जोगवनीबाट ब्राउन सुगरसहित एक जना पक्राउ ८ महिना पहिले
विप्लव भन्छ, साथी पर्खिरहेका पौडलमाथि प्रहरीले गोली हानी कायरतापूर्वक हत्या गर्यो १ वर्ष पहिले
दशगजामा अलपत्र नेपालीहरुको उद्धार गर्दै सुरक्षा निकाय ५ महिना पहिले